20 Icon and Graphics Generators - phpmyanmar.com
Posted By - Ko Ko - August 14, 2008
Summary : You do not need to beagreat artist to get great looking graphics. In fact, sometimes you do not even have to roll up your sleeves. We have put togetheralist of 20 sites that will help you create icons, favicons, animations and various graphics in no time.
Web Developer တစ်ဦး အတွက် လက်နက်များ။
သင်သည် Web Developer တစ်ဦး ဖြစ် ပါက၊ လိုလျှင် လိုသလို အသုံးပြု နိုင်မည်၊ ကရိယာ တံဆာပလာ များနှင့် အလား တူသော၊ software မျိုးစုံ ကို စုဆောင်း ထားရန် လိုအပ် ပါမည်။ အသုံး ဝင်မည် ထင်သည့် software များကို စုဆောင်း ပြီး အောက်တွင် ဖေါ်ပြ အပ် ပါသည်။
Source - http://mashable.com
EliteNick.com�s Custom AIM Icon Maker - Use pre-made backgrounds and then add the text and colors you want foraunique AIM Buddy Icon.
Email Icon Generator - Generate an email address icon to display on your site. A safe way to show off your email address that spambots can�t read.
End of Article - 20 Icon and Graphics Generators
ထွန်းလင်းအောင် February 13, 2010 - 11:50 pm
ကောင်ပါ တယ် ခငိဗျာ ကျွန် တော် Ajax ကြောင်ပိုသိခြင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ... ဖြစ် ရင်ကူညီး ပါ ခင်ဗျာ Ajax အ ကြောင်လဲး ကောင် ကောင် မသိ တေး ပါ ... ဖြစ် နိုင်ရင်နည်းနည်းလောက်ရှင်း ပြ ပေး ပါ ခင်ဗျာ....
Processing time -- 0.0263 seconds.